Internet Cafe - အင်တာနက်ဆိုင်မှာ မြန်မာစာရေးလို့၊ ဖတ်လို့ရအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ
အင်တာနက်ဆိုင်မှာ အသုံးပြုတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေက ဒီနည်းကို ပိုစ့်တင်ပေးဖို့ တောင်းထားတာ နည်းနည်းကြာနေပြီ..။ ဒီနေ့မှပဲ တင်ပေးဖြစ်တော့တယ်..။ တကယ်တော့ ဒီလိုလုပ်နည်းလေးတွေကလည်း အားလုံးလိုလို လုပ်တတ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်..။ မြန်မာပြည်မှာနေတဲ့သူများ အတွက်တော့ သိပ်မလိုအပ်ပေမယ့် နိုင်ငံခြားမှာ ရောက်နေတဲ့ မြန်မာပြည်သားတွေ အတွက် လုပ်တတ်ထားဖို့ တကယ်လိုအပ်တဲ့ နည်းလေးပါ.. နိုင်ငံခြားက အင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ မြန်မာဖေါင့် သွင်းထားတာ မရှိပါဘူး..။ မိမိတို့ အသုံးပြုတော့မယ်ဆိုမှ အင်တာနက်ကနေ ဒေါင်းလော့ချပြီး Install ဆွဲထည့်ရပါတယ်..။ မြန်မာစာတော့ ဖတ်လို့ ရပါပြီ.. ဒါပေမယ့် ရေးလို့ မရသေးပါဘူး..။ ရေးလို့ရအောင် အခုကျနော် ပြမယ့် နည်းလေးနဲ့ လုပ်ပေးရပါမယ်..။ လုပ်ရတာတော့ သိပ်မခက်ပါဘူး..။ ဒါပေမယ့် အလွတ်ရအောင် လုပ်တတ်ထားဖို့တော့ လိုပါတယ်..။ အရင်တုန်းက ကျနော်ကိုယ်တိုင် ရွာလည်ခဲ့ရတဲ့ နည်းလေးပါ..။ အင်တာနက်ဆိုင်ကိုသွား ဇော်ဂျီဖေါင့်ကိုထည့်ပြီး.. မြန်မာစာ ဖတ်လို့တော့ ရပါရဲ့.. ရေးလို့မရလို့ ဟိုလျှောက်ကလိ၊ ဒီလျှောက်စမ်းနဲ့ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ ၃၊၄နာရီသာ အချိန်ကုန်သွားတယ်.. မြန်မာစာတလုံးမှ ရေးလို့မရခဲ့ဘူး..။ နောက်တော့ ဒီနည်းလေးနဲ့ အဆင်ပြေသွားတော့ ကျနော့်သူငယ်ချင်းတွေကိုတောင် သင်ပေးခဲ့သေးတယ်..။ အခုတော့ သူတို့က တော်တော်လေး ဟုတ်နေပြီ..။ အဆင်ကိုပြေလို့..
အခုဒီလုပ်နည်းလေးကို နောက်ပိုင်း ရှာရလွယ်အောင် ကျနော့်ဆိုဒ်ရဲ့ ညာဘက်အခြမ်းမှာ လင့်တခုလုပ်ပြီး ချိတ်ပေးထားမှာပါ..။ ဘယ်သူပဲဖြစ်ဖြစ် ဒီနေရာကနေ အလွယ်လုပ်တတ်အောင်နဲ့ Zawgyi-One Font, Zawgyi လက်ကွက်ဖေါင့်နဲ့ WinRAR 32-bit ၊ 64-bit ၂ခုစလုံးအတွက် ဖူးဗါးရှင်းဖြစ်အောင် WinRAR ကီးဂျန်လေးပါ.. အားလုံးကို Software သက်သက် (WinRAR နဲ့မချုပ်ပဲ) တင်ပေးထားပါတယ်..။ ဒေါင်းလော့ချပြီး ၂ချက်တောက်လိုက်ယုံနဲ့ အသုံးပြုလို့ ရအောင်လို့ပါ..။ အသုံးပြုတဲ့သူတွေအနေနဲ့ ဒေါင်းလော့ချတဲ့အခါ ဒီလင့်တွေ သေနေခဲ့ရင် Cbox မှာဖြစ်ဖြစ်၊ Comments နေရာမှာဖြစ်ဖြစ် အော်ခဲ့ပါ.. ရေးခဲ့ပေးပါ..။ သေသွားတဲ့ လင့်တွေကို ကျနော် ပြန်တင်ထားပေးမှာပါ..။ စာလည်းရှည်နေပြီ.. လုပ်နည်းကို အောက်မှာဆက်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ.. အရင်ဆုံး အင်တာနက်ဆိုင်မှာ အသုံးပြုသူများကတော့ Zawgyi-One Font ကို ဒေါင်းလော့ချ Install ဆွဲထည့်ပြီးရင်.. Finish နှိပ် ပြီးရင်.. အောက်ကအပေါ်ဆုံး ပုံလေးအတိုင်း ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..။ Cancel နှိပ်ပေးလိုက်ပါ..။
အင်တာနက်ဆိုင်မှာ Zawgyi-One Font ကို Install ဆွဲထည့်ပြီးရင် အောက်ကဘောက်စ်လေး ပေါ်လာတဲ့ အခါ Cancel နှိပ်ပေးလိုက်ပါ..
ဒီနေရာမှာ တခုဖြတ်ပြောပြချင်ပါတယ်..။ ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့ သူများအတွက် မိမိတို့ကွန်ပျူတာဟာ 32-bit လား၊ 64-bit လားသိရအောင် ဒီအောက်ကပုံအတိုင်း ရှာကြည့်ပါ..။ 32-bit ဆိုရင် Zawgyi-One Font တခုကိုပဲ Install ဆွဲထည့်လိုက်ပြီး.. Restart ချပြီးရင် (စက်ပိတ်ပြီးပြန်ပွင့်လာရင်) မြန်မာစာ ရေးလို့၊ဖတ်လို့ ရသွားပါပြီ..။ အောက်ကပုံအတိုင်း 64-bit ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် Keyboard Layout For 64-bit (ဇော်ဂျီလက်ကွက်) ကို Install ဆွဲထည့်ပေးပြီးမှ မြန်မာစာ ရိုက်လို့ ရမှာပါ..။ အင်တာနက်ဆိုင်မှာ အသုံးပြုသူများကတော့ Zawgyi-One Font တမျိုးထည်းနဲ့တင် လုံလောက်ပါပြီ.. လုပ်နည်းကို အောက်ကပုံတွေအတိုင်း ဆက်ကြည့်လိုက်ပါဗျာ..။
အရင်ဆုံး အင်တာနက်ဆိုင်ကို ရောက်ရင် အောက်ကပုံမျိုး Task Bar ပေါ်မှာ EN ဆိုတဲ့ စာသားလေး ပါတာကို အရင်ကြည့်လိုက်ပါ..။ ပါတယ်ဆိုရင် EN စာသားလေးပေါ်မှာ Right Click ထောက်လိုက်ပါ..။ ပေါ်လာတဲ့ အကွက်လေးထဲက Setting ကို ကလစ်ပြီး ဝင်သွားလိုက်ပါ..။ နောက်ထပ်ဘောက်စ်လေး တခုပေါ်လာရင် Chinese တို့လို တခြားဖေါင့်တွေကို တချက်ကလစ်ပြီး Remove နဲ့ ဖျက်ထုတ်ပစ်ပါ..။ အဲဒီနေရာမှာ EN English (United Kingdom) / (United States) တခုပဲချန်ထားခဲ့ပါ..။ အောက်ကပုံတွေမှာ လုပ်ပြထားပါတယ်..။ ဆက်ကြည့်လိုက်ပါ..။
တကယ်လို့ အင်တာနက်ဆိုင်က မိမိတို့ အသုံးပြုတဲ့ ကွန်ပျူတာတွေမှာ အပေါ်ပုံမှာပြထားသလို Task Bar မှာ EN ဆိုတဲ့စာသား မပေါ်ဘူးဆိုရင် အောက်ကပုံအတိုင်း Setting ရှိတဲ့နေရာကို ဝင်သွားလိုက်ပါ..။ Start >> Control Panel >> Region And Language ကို ကလစ်လိုက်ရင် သူ့ရဲ့ ဘောက်စ်လေးပေါ်လာပါလိမ့်မယ်..။ အဲဒီဘောက်စ်လေးထဲက Keyboard And Language ကိုကလစ်ပြီး နောက်ထပ် Change Keyboard ကိုထပ်ကလစ်ပါ..။ အောက်ပုံ၂ပုံ..
အပေါ်ပိုင်း Task Bar မှ EN >> R/C >> Setting ကနေ သွားလို့ ပေါ်လာတဲ့ ဘောက်စ်နဲ့.. Start >> Control Panel >> Region And Language >> Keyboard And Language >> Change Language ကနေသွားလိုက်လို့ ပေါ်လာတဲ့ ဘောက်စ် အတူတူပါပဲ..။ မလိုတဲ့ Language တွေဖျက်ထုတ်ပြီး EN English (United Kingdom) / (United States) တခုပဲ ကျန်တော့ရင် သူ့ဘေးက Add ကိုကလစ်လိုက်ပါ..။ နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ ဘောက်စ်ထဲမှာ English (United States) or English (United Kingdom) မိမိတို့ အသုံးပြုတဲ့ စက်မှာ ပေါ်လာတဲ့ စာသားအတိုင်း Language ကိုလိုက်ရှာပါ..။ တွေ့ရင် အဲဒီစာသား English (United States) or English (United Kingdom) ရဲ့ ရှေ့က အပေါင်းလက္ခဏာလေး [+] ကိုကလစ်ပါ.. အဲဒီအောက်မှာ စာတန်းလေးတွေ ပြုတ်ကျလာရင်.. အဲထဲက Alpha Zawgyi Myanmar Unicode 2008 နဲ့ နောက်ထပ် Zawgyi Myanmar Unicode L စာသား၂ခု ရှေ့မှာ အမှန်ခြစ်လေးတွေ တပ်ပေးလိုက်ပါ..။ 1,2 နေရာတွေ အောက်ပုံမှာ ဆက်ကြည့်ပါ..။ ပြီးရင်3နေရာက OK နှိပ်ပေးလိုက်ပါ..။
အပေါ်ပုံလိုမျိုး စာကြောင်း ၃ကြောင်း ဘောက်စ်လေးထဲမှာ ရောက်လာပါပြီ..။ ပြီးရင်တော့ အပေါ်ပုံအတိုင်း Apply >> OK ကလစ်ပေးလိုက်ပါ..။ ဒါဆိုရင် အင်တာနက်ဆိုင်က ကွန်ပျူတာတွေမှာ မြန်မာစာ ရေးလို့ ဖတ်လို့ ရသွားပါပြီ..။ တကယ်လို့ Control Panel က ဝင်လာတာဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် ဘောက်စ်လေး တခုပိတ်ပေးဖို့ ကျန်ပါသေးတယ်..။ အောက်ကပုံလေးအတိုင်း Apply >> OK ထပ်နှိပ်ပေးလိုက်ပြီး ပိတ်ပေးလိုက်ပါ..။ မြန်မာစာ ရေးလို့ ရသွားပါပြီ..။ အောက်ဆုံးမှာတော့ Notepad နဲ့ မြန်မာစာ ရေးလို့ ရအောင် လုပ်ပြထားပါတယ်..။ ကီးဘုတ်မှ Ctrl+Shift ကိုတွဲနှိပ်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာနဲ့ မြန်မာစာကို တလှည့်စီ ပြောင်းရိုက်ရမယ်ဆိုတာ အားလုံးသိပြီးလောက်ပြီမို့ ပြောပြဖို့မလိုလောက်တော့ဘူး ထင်ပါတယ်..။
ဒီလောက်ဆို ...ဘ၀တူ ရွှေပါရမီပညာဒါနမှ သူငယ်ချင်းများအားလုံး ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့ ကြိုက်တဲ့ နေရာမှာ
ကြိုက်သလို...မြန်မာစာနဲ့ ကစားလို့ ရပြီးပေါ့....
စေတနာ အကျိုဆောင် ..ဇာနည်အောင်
Posted အဲဒီအချိန်က Thursday, December 06, 2012
အမေးရှိတော့ အဖြေရှိ..( ဗုဒ္ဓအကြောင်းမသိသူများ )